Manchester United oo bilowday inay ka firkirto sidii ay garoonka Old Trafford uga diri lahayd Alexis Sanchez! – Gool FM
Manchester United oo bilowday inay ka firkirto sidii ay garoonka Old Trafford uga diri lahayd Alexis Sanchez!
(Manchester) 12 March 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay bilowday inay ka fikirto suurto-galnimada inay amaah ku bixiso Alexis Sanchez.
Weeraryahanka ayaa ka tagay kooxda Arsenal waxaana uu u dhaqaaqay garoonka Old Trafford bishii Janaayo ee sanadkii 2018, laakiin xiddigan ayaa kaliya dhaliyey shan gool 41 kulan oo uu tan iyo markaas ciyaaray tartammada oo dhan.
Sanchez waxaa weli heshiiskiisa kooxda Man United uga harsan in ka badan saddex sanadood, laakiin Wargeyska The Sun ayaa warinaya in macallin Ole Gunnar Solskjaer uu diyaar u yahay inuu laacibkan tago, isla markaana xiddiga xulka qaranka Chile uusanba ku jirin qorshihiisa.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Man United aysan ku rajo weynayn inay si toos ah isaga wada iibiso Sanchez, waxaana ay ku dhib qabtaa mushaarka ciyaaryahanku ka qaato oo ah mid aad u sarreeya, taasoo ka dhigan inay amaah ku diri doonaan.
Illaa iyo hadda lama sheegin kooxaha doonaya inay Alexis Sanchez amaah uga qaadanayaan Manchester United, laakiin kooxda reer England ayaa doonaysa in ugu yaraan uu ka qafiifo lacagaha mushaaraadka ee uu ka qaato laacibkan reer Chile.
Sanchez ayaa wajahaya dagaal si uu markale u ciyaaro xilli ciyaareedkaan, isagoo dhaawac jilibka ah uu ka soo gaaray kulankii Southampton ee horraantii bishaan.
Kabtanka Kooxda Ajax oo kala doortay tan uu ku biirayo Barcelona iyo Juventus
BAL EEG: Macquul ma tahay in Shaxda Real Madrid ay sidan u Muuqato kaddib markii uu dib ugu soo laabtay Zidane!!?